ICC CT Sri Lanka-Zimbabwe | Photo Gallery
ICC CT Sri Lanka-Zimbabwe
October 18, 2006 12:20
Sri Lankan cricketer Upul Tharanga, right, and Kumar Sangakkara, gesture during a break at the ICC Champions Trophy qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Anthony Ireland of Zimbabwe delivers a ball to Sanath Jayasuriya, unseen, of Sri Lanka, during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketer Sanath Jayasuriya, left, walks towards the pavilion after being dismissed, as cricketers from Zimbabwe celebrate during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Elton Chigumbura, left, celebrates dismissal of Sanath Jayasuriya of Sri Lanka, unseen, with teammates Brendon Taylor, center, and Anthony Ireland of Zimbabwe during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketer Upul Tharanga, second left, looks on as Zimbabwe's Tawanda Mupariwa, on ground, tries to stop a ball during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketers Upul Tharanga, second right, and Sanath Jayasuriya, second left, run between the wickets as Zimbabwe's Tawanda Mupariwa, right, and wicket keeper Brendon Taylor, left, look on during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketer Upul Tharanga acknowledges the crowd after scoring a century against Zimbabwe during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketer Kumar Sangakkara displays a thumbs up after he was declared not out after an appeal by Zimbabwe during the ICC Champions Trophy's qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketer Kumar Sangakara bats during the ICC Champions Trophy's qualifying match against Zimbabwe in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lankan cricketer Upul Tharanga, right, bats as Zimbabwe wicket keeper Brendon Taylor, left, gestures during the ICC Champions Trophy qualifying match at Ahmedabad on Tuesday.
Zimbabwe's cricketers Elton Chigumbura, left, and Hamilton Masakadza celebrate a dismissal during the ICC Champions Trophy qualifying match in Ahmedabad on Tuesday.
Sri Lanka's Lasith Malinga, left, bowls to Tafadzwa Mufambishi of Zimbabwe, during ICC Champions Trophy's qualifying match at Ahmedabad on Tuesday.
Elton Chigumbura of Zimbabwe walks out to pavilion as Sri Lankan cricketers celebrate his dismissal during ICC Champions Trophy's qualifying match at Ahmedabad on Tuesday.
Hamilton Masakadza of Zimbabwe reacts after being given out playing against Sri Lanka delivery during the ICC Champions Trophy's qualifying match at Ahmedabad on Tuesday.